ISIOKWU ỤLỌ NCHE A | ỌCHỊCHỊ NRỤRỤ AKA NA-AGAGHỊ ADỊ NA YA
E nwere ihe otu onye Nikaragụa bụ́ aka ochie n’ịgụkọ ego kwuru mgbe ọ na-akọwa ihe mere o ji chee na nrụrụ aka agaghị ala ala na gọọmenti. Ọ sịrị: “Ndị ọrụ gọọmenti bụ ụmụ amaala, ebe ọ bụ na ụmụ amaala na-arụrụ aka, ndị ọrụ gọọmenti ga-esokwa na-arụrụ aka.”
Ebe ọ bụ na onye ukwu na onye nta na-arụrụ aka, í cheghị na ndị ọchịchị ga na-arụrụkwa aka? Ya bụrụ otú ahụ, ọ pụtara na ọchịchị nke nrụrụ aka na-agaghị adị na ya agaghị esi n’aka ụmụ mmadụ. Baịbụl gwara anyị na ọchịchị ahụ bụ Alaeze Chineke. Ọ bụ ya ka Jizọs kụziiri ndị na-eso ụzọ ya ka ha na-ekpe ekpere ka ọ bịa.—Matiu 6:9, 10.
Alaeze Chineke bụ ọchịchị nke ga-esi n’eluigwe na-achị ụwa. Ọchịchị ahụ ga-ewepụ ọchịchị niile nke ụmụ mmadụ. (Abụ Ọma 2:8, 9; Mkpughe 16:14; 19:19-21) E nwere ọtụtụ ihe ọma Alaeze Chineke ga-emere ndị mmadụ. Otu n’ime ha bụ na ọ ga-eme ka nrụrụ aka ndị ọchịchị na-arụrụ kwụsị. Ka anyị leba anya n’ihe isii gosiri na Alaeze Chineke ga-eme ya.
NKE MBỤ: IKE Ọ GA-EJI ACHỊ
NSOGBU E NWERE N’ỤWA: Ọchịchị ụmụ mmadụ na-esikarị n’ụtụ isi nakwa n’ụtụ ndị ọzọ ụmụ amaala ha na-atụ enweta ego ha ji arụ ọrụ. Ego niile a na-enubata n’akpa gọọmenti na-adọ ụfọdụ ndị ọrụ gọọmenti akpịrị, mee ka ha na-ezuru ego gọọmenti, meekwa ka ụfọdụ n’ime ha na-anara ndị mmadụ aka azụ ka ha wepụrụ ha ego n’ụtụ isi ha kwesịrị ịtụ ma ọ bụ n’ego ọzọ ndị ha kwesịrị ịkwụ gọọmenti. Ebe ọ bụ na ego niile a anaghị abatacha n’akpa gọọmenti, gọọmenti na-ebugo ụtụ isi ndị mmadụ na-akwụ. Ha na-ebugo ya, ndị na-ezuru ya ana-achọkwu nke ha ga-ezuru, nrụrụ aka ana-arịzi ibe ya elu. Ndị kacha ata ahụhụ ya bụ ndị na-akwụwa aka ọtọ.
IHE GA-AKWỤSỊ YA: Ọ bụ Jehova Chineke, bụ́ onye pụrụ ime ihe niile, hiwere Alaeze Chineke. * (Mkpughe 11:15) Mgbe Alaeze ahụ ga-achịwa ụwa, a gaghị na-ana ndị mmadụ ụtụ isi ka e nwee ike na-egboro ha mkpa ha. Kama, ‘ike dị ukwuu’ Chineke nwere na otú o si emesapụ aka ga-eme ka ọ na-egboro ndị niile Alaeze ahụ ga-achị mkpa ha.—Aịzaya 40:26; Abụ Ọma 145:16.
NKE ABỤỌ: ONYE GA-ACHỊ
NSOGBU E NWERE N’ỤWA: Susan Rose-Ackerman, onye anyị dere ihe o kwuru n’isiokwu bu nke a ụzọ, sịrị na ọ bụrụ na nrụrụ aka ga-akwụsị, ọ ga-ebido ná “ndị nọ n’isi.” Ọ bụrụ na gọọmenti agbalịwa ka o mee ka ndị uwe ojii ma ọ bụ ndị kọstọm kwụsị ịrụrụ aka, ma hapụ ndị isi ọchịchị, ndị mmadụ na-ebido lewe ha anya ọjọọ. Otú ọ sọkwara onye ọchịchị ya bụrụ ezigbo mmadụ, ọ ga na-eme mmehie. Baịbụl sịrị “na e nweghị onye ezi omume n’ụwa nke na-eme naanị ezi ihe.”—Ekliziastis 7:20.
Jizọs anabataghị elu na ala Setan chọrọ inye ya
IHE GA-AKWỤSỊ YA: Jizọs Kraịst adịghị ka ụmụ mmadụ na-ezughị okè n’ihi na ọ bụ Chineke họpụtara ya ka ọ bụrụ eze ga-achị n’Alaeze ya, o nweghịkwa onye nwere ike ịnwata ya ka o mewe ihe ọjọọ. Ihe Jizọs mere mgbe Ekwensu nwara ya gosiri na nke a bụ eziokwu. Ekwensu kwuru na ọ ga-enye ya “alaeze niile nke ụwa na ebube ha” ma ọ bụrụ na Jizọs adaa n’ala fee ya. Ma, Jizọs anabataghị elu na ala ahụ ọ chọrọ inye ya. (Matiu 4:8-10; Jọn 14:30) N’oge a kpọgidere Jizọs n’osisi, o kpebisiri ike na ya agaghị eme ihe ọjọọ ọ bụla. Ọ bụ ya mere o ji jụ ịṅụ ọgwụ ọjọọ e nyere ya, nke gaara eme ka uche ghara izucha ya okè, ahụhụ ọ na-ata agharakwa irucha ya n’ahụ́. (Matiu 27:34) Jizọs nọzi n’eluigwe ugbu a. Ihe niile o mere gosiri na o ruru eru ịbụ eze n’Alaeze Chineke.—Ndị Filipaị 2:8-11.
NKE ATỌ: A GAGHỊ AGBANWE ỌCHỊCHỊ A AGBANWE
NSOGBU E NWERE N’ỤWA: Ọ na-abụ afọ ole na ole gafee, mba dị iche iche emee ntụliaka ọchịchị ná mba ha. A sịrị na ihe mere ha ji eme ya bụ ka ha wepụ ndị na-arụrụ aka n’ọchịchị. Ma nke bụ́ eziokwu bụ na ná mba dị iche iche, ma ndị nke a sịrị mepere emepe, ọ na-abụ a chụwa nta vootu ma ọ bụ e mewe ntụliaka, ndị mmadụ anaghị akwụwa aka ha ọtọ. Mgbe ụfọdụ, ego ndị ọgaranya na-enye ndị na-azọ ọkwá ọchịchị ma ọ bụ ihe ndị ọzọ ha na-emere ha na-emezi ka ndị meriri ná ntụliaka mewezie ihe ndị ahụ nyere ha ego chọrọ.
Otu ọkàikpe e nwere n’ụlọikpe kasị elu n’Amerịka, bụ́ John Paul Stevens, dere na ihe a ndị nwere ego na-emere ndị na-azọ ọkwá ọchịchị “na-emebi ọchịchị, na-emekwa ka ndị a na-achị ghara ịtụkwasị ndị ọchịchị obi.” Ka a sịkwa ihe mere ọtụtụ ndị n’ebe niile n’ụwa ji eche na ọ bụ òtù ndọrọ ndọrọ ọchịchị kacha arụrụ aka.
IHE GA-AKWỤSỊ YA: Alaeze Chineke ga-eme ka nrụrụ aka a na-arụrụ ma a chụwa nta vootu ma ọ bụ ma e mewe ntụliaka kwụsị n’ihi na ọ bụ ọchịchị a na-agaghị agbanwe agbanwe. (Daniel 7:13, 14) Ebe ọ bụ Chineke họpụtara Eze ga-achị n’Alaeze ahụ, ndị mmadụ agaghị eme ntụliaka ka ha họpụta ya ma ọ bụ chụpụ ya n’ọchịchị. Ebe ọ bụkwa na Eze a na ọchịchị ya agaghị agbanwe agbanwe, ihe niile ọ ga-emere ndị mmadụ ga-abara ha uru mgbe niile.
NKE ANỌ: IWU NDỊ Ọ GA-ACHỊ GA-EDEBE
Alaeze Chineke bụ ọchịchị nke ga-esi n’eluigwe na-achị ụwa
NSOGBU E NWERE N’ỤWA: Mmadụ nwere ike iche na e nwekwuo iwu ọhụrụ, nrụrụ aka ebelata. Ma, ndị ọkachamara achọpụtala na ọtụtụ mgbe, imekwu iwu ndị ọhụrụ na-eme ka nrụrụ aka na-akakwu njọ. Ihe ọzọ bụ na e tie iwu ọhụrụ ga-eme ka nrụrụ aka belata, a na-emefukarị nnukwu ego tupu iwu ọhụrụ ahụ enwee isi. E mechaakwa, o nweghị ezigbo uru iwu ọhụrụ ahụ na-aba.
IHE GA-AKWỤSỊ YA: E nwere iwu ndị a chọrọ ka ndị Alaeze Chineke ga-achị na-edebe. Iwu ndị ahụ ka iwu niile ọchịchị ụmụ mmadụ na-eti mma. Dị ka ihe atụ, mgbe Jizọs na-akụziri ndị mmadụ ihe, o nyeghị ha ọtụtụ iwu ha ga na-edebe, kama ọ sịrị ha: “Ihe niile unu chọrọ ka ndị mmadụ na-emere unu, unu onwe unu aghaghị imere ha otú ahụ.” (Matiu 7:12) Otu ihe mere iwu Chineke ji dị mma karịa iwu mmadụ bụ na iwu ya na-enyere mmadụ aka ka ihe ọ na-eche n’obi ya na àgwà ọ na-akpa ka mma. Jizọs sịrị: “Hụ onye agbata obi gị n’anya dị ka onwe gị.” (Matiu 22:39) Ebe ọ bụ na Chineke ma ihe dị ndị mmadụ n’obi, ọ ga-ahụ na ndị Alaeze ya ga-achị na-eme ihe niile ọ chọrọ.—1 Samuel 16:7.
NKE ISE: Ọ GA-EME KA IHE ỌJỌỌ GHARA ỊNA-ADỊ NDỊ MMADỤ N’OBI
NSOGBU E NWERE N’ỤWA: Ọ bụ anyaukwu na ndị mmadụ ịchọ ihe ga-abara naanị onwe ha uru mere ha ji arụrụ aka. Ọtụtụ mgbe, ndị ọchịchị na ndị a na-achị achị na-egosi na ha nwere anyaukwu nakwa na ha na-achọ ihe ga-abara naanị ha uru. Ọ bụ ya mere ndị rụrụ ụlọ ahịa ahụ dagburu ndị mmadụ, bụ́ nke anyị kwuru okwu ya n’isiokwu bu nke a ụzọ, ji nye ndị na-ahụ maka ụlọ ndị a na-arụ n’obodo Sol aka azụ. Ha ma na inye ha aka azụ ga-akara ha mfe karịa ịrụ ụlọ ahụ otú kwesịrị ekwesị.
Ihe ga-eme ka ndị mmadụ kwụsị ịrụrụ aka bụ ịkụziri ha ihe ga-eme ka ha kwụsị ịdị anyaukwu na ịchọ ihe ga-abara naanị ha uru, kwụsịkwa àgwà ọjọọ ndị ọzọ ririla ha ahụ́. Ma, ọchịchị ụmụ mmadụ achọghị ịkụziri ndị mmadụ ihe ga-eme ka ihe ọjọọ ghara ịna-adị ha n’obi. Ọ bụrụgodị na ha chọrọ, ha agaghị emeli ya.
IHE GA-AKWỤSỊ YA: Alaeze Chineke ga-eme ka nrụrụ aka kwụsị kpamkpam n’ihi na a ga-akụziri ndị Alaeze a ga-achị ihe ha ga-eme ka ha kwụsị iche ihe ọjọọ n’obi ha, bụ́kwanụ ihe na-eme ka ndị mmadụ rụrụwa aka. * Ihe a a ga-akụziri ha ga-eme ka ‘ike nke na-eduzi uche ha dị ọhụrụ.’ (Ndị Efesọs 4:23) Ha ga-amụta otú ihe ha nwere ga-esi na-eju ha afọ na otú ha ga-esi na-achọ ọdịmma ndị ọzọ kama inwe anyaukwu na ịchọ ihe ga-abara naanị ha uru.—Ndị Filipaị 2:4; 1 Timoti 6:6.
NKE ISII: NDỊ GA-ABỤ ỤMỤ AMAALA YA
NSOGBU E NWERE N’ỤWA: Ọ bụrụgodị na ndị mmadụ nọ n’ebe ihe niile na-agaziri ha, a na-akụzikwara ha otú kacha mma ha ga-esi na-ebi ndụ, ụfọdụ n’ime ha ka nwere ike ịna-arụrụ aka ma na-eme otú masịrị ha. Otu ọkachamara kwuru na ọ bụ ya mere na ọchịchị ụmụ mmadụ agaghị akwụsịli nrụrụ aka. Naanị ihe ha nwere ike ime bụ ịkwụsịlata ya nakwa nsogbu ndị ọ na-akpatara ndị mmadụ.
IHE GA-AKWỤSỊ YA: Ngalaba òtù mba ụwa na-ahụ maka ịkwụsị nrụrụ aka kwuru na ọ bụrụ na nrụrụ aka ga-akwụsị, gọọmenti kwesịrị ịgba ụmụ amaala ya ume ka ha “na-akwụwa aka ọtọ, na-ekwu eziokwu ma na-eme ihe ha kwesịrị ime n’obodo ha.” Ihe a ngalaba òtù mba ụwa kwuru amaka. Ma, ihe Alaeze Chineke na-eme abụghị naanị ịgba ndị ọ ga-achị ume ka ha kpawa àgwà ndị a, kama ọ na-eme ka o doo ha anya na ọ bụ ihe ha ga-emerịrị. Baịbụl kwuru na “ndị anyaukwu” na “ndị ụgha” agaghị eketa Alaeze Chineke.—1 Ndị Kọrịnt 6:9-11; Mkpughe 21:8.
Ndị mmadụ nwere ike ịmụta ịna-akpa àgwà ọma otú ndị mbụ soro ụzọ Jizọs mụtara. Dị ka ihe atụ, mgbe otu onye na-eso ụzọ Jizọs aha ya bụ Saịmọn nyewere ndịozi Jizọs aka azụ ka ha mee ka o nweta mmụọ nsọ, ha jụrụ ịnata ya ego ahụ ma sị ya: “Chegharịa n’ihe ọjọọ a ị na-eme.” Ozugbo Saịmọn hụrụ na ihe ọjọọ ahụ dị ya n’obi ga-akpatara ya nsogbu, ọ rịọrọ ndịozi ahụ ka ha kpeere ya ekpere ka nsogbu ahụ ghara iri isi ya.—Ọrụ Ndịozi 8:18-24.
IHE Ị GA-EME KA I SORO NÁ NDỊ ALAEZE AHỤ GA-ACHỊ
I nwere ike iso ná ndị Alaeze Chineke ga-achị n’agbanyeghị ebe i si n’ụwa. (Ọrụ Ndịozi 10:34, 35) N’ebe niile n’ụwa taa, a na-akụziri ndị mmadụ ihe ha ga-eme ka ha soro ná ndị Alaeze ahụ ga-achị. Ihe a a na-akụziri ndị mmadụ ga-eme ka ị mata otú ị ga-esi soro ná ndị ọ ga-achị. Obi ga-adị Ndịàmà Jehova ụtọ igosi gị otú ha si akụziri ndị mmadụ Baịbụl n’anaghị ha ego. Gị na ha nwere ike iji ihe dị ka nkeji iri na-amụ Baịbụl kwa izu. Ị ga-amụtakwu gbasara “ozi ọma alaeze Chineke” na otú Alaeze ahụ ga-esi eme ka nrụrụ aka ndị ọchịchị na-arụrụ kwụsị, mụtakwa ihe ndị ọzọ. (Luk 4:43) Gbalịa kpọtụrụ Ndịàmà Jehova bi gị nso ma ọ bụ gị agaa n’adres Ịntanet anyị bụ́ jw.org/ig.
Ị̀ ga-achọ ka Ndịàmà Jehova bịa n’ụlọ gị na-amụrụ gị Baịbụl n’anaghị gị ego?
^ para. 22 Dị ka ihe atụ, gụọ isiokwu bụ́ “Mmadụ Ò Nwere Ike Ịkwụwa Aka Ọtọ n’Ụwa A Nrụrụ Aka Juru?” Ọ gbara n’Ụlọ Nche Ọktoba 1, 2012.